Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Rafitra maharitra ilaina amin'ny orinasam-pizahantany kely sy salantsalany hoy ny minisitra Bartlett
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett, dia nilaza fa mitombo ny filana manangana rafitra mahay sy maharitra mba hampifangaro tsara kokoa ireo orinasa madinidinika sy antonontonony amin'ny rojom-bidin'ny fizahan-tany ary hisorohana ny famoahana ny vola azo avy amin'ny indostria.
"Ny fizahan-tany miaraka amin'ny fahaizany lehibe amin'ny fampandrosoana toekarena dia mijaly noho ny famoahana, ny asanay dia ny manomboka ny fifanakalozan-kevitra momba ny fomba hamoronana fifandraisana mba hamehezana ny fahabangan'ny fizahantany.
Ka raha afaka manangana ny sehatra ho an'ny Orinasa fizahan-tany madinika sy salantsalany izahay, izay maneho ny 80% amin'ny fizahan-tany manerantany, raha afaka mitondra hevitra mamorona sy fanavaozana eto an-drenivohitra isika mba hahafahana manatanteraka ny fanovana, dia omen'ny ny toeran'ireo mandray sy ny fitazonana ny fidiran'ny fizahan-tany amin'ny toekarena dia afaka mijanona any amin'ireo firenena, "hoy ny minisitra Bartlett.
Ny Minisitra dia nanao izany fanambarana izany androany tamin'ny fiorenan'ny Konferansa Iraisam-pirenena faha-2 momba ny asa sy ny fitomboana iraisana: orinasa mpizahatany kely sy salantsalany (SMTE), izay notontosain'ny governemanta sy ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany eran-tany.
Ity hetsika sonia ity dia valiny mivantana tamin'ny kaonferansa manerantany momba ny asa sy ny fitomboana tafiditra ao Jamaika tamin'ny 2017, izay nitondra ny fanamby maharitra maro atrehin'ireo SMTE, ao anatin'izany ny olan'ny fidirana amin'ny trosa, marketing, teknolojia ary ny fampandrosoana ny orinasa.
Hitan'ny mpikarakara ny fihaonambe fa malina ny hetsika hafa mifantoka fotsiny amin'ny SMTE sy ny fomba fanao tsara indrindra izay misy ifandraisany mivantana amin'ny fivoarany.
“Ity fihaonambe ity dia hanampy antsika hanao zavatra roa. Izy io dia hanampy antsika hivezivezy amin'ny làlana ahafahan'ny vina sy ny fampanantenan'ny fandraisana an-tanana avy amin'ity orinasa lehibe ity hahitantsika fomba hahatanteraka azy. Faharoa, hijerentsika ny fomba ahafahantsika miaraka mitondra ny hevitra sy ny renivohitra, mba hamoronana io synergy io izay ahafahana manova ny foto-kevitra sy ny hevitra ho lasa entana sy serivisy ara-materialy izay manome lanja ny olontsika ", hoy ny minisitra Bartlett.
Nampiany koa fa, "Ny fizahantany no hery toekarena mirindra tokana manan-danja indrindra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Izany firaisankina izany dia tsy mety hitranga rehefa misy tsy fitoviana lehibe eo amin'ireo mpamatsy, mpikirakira hevitra sy tompon'ny vokatra ary ireo mpamatsy vola sy mpamily ilain'ny vokatra. ”
Amin'ny faran'ny fihaonambe, ny minisiteran'ny fizahantany sy ny UNWTO dia manantena ny hahita vokatra azo tsapain-tanana izay hanampy amin'ny fananganana toekarena maharitra izay misy fiantraikany tsara amin'ny fiainan'ny olona manerantany.